ubudlelwane obufanele - ngesihloko eziyinkimbinkimbi futhi enza izinto ezihlukahlukene ukuze ukwazi ukukhuluma ngakho phakade. Ngokuvamile, uma kuvakashe ummeleli wendlunkulu wobulili obuhlukile unesithakazelo esiqotho intombazane noma owesifazane, ngokuqinisekile uyabuza: ukuthi kuyini, ngoba ingxenye yayo, it uzizwa? Ukucacisa isimo ngezinga elithile usizo Kissing.
Ngakho, lokho kusho ngokwanga emabunzini noma esihlathini? Uma umuntu omusha (noma umuntu ovuthiwe) mdala kunawe, bathi, iminyaka 5 ubudala nangaphezulu, uma kukusiza ukuphuma izimo ezinzima, leluleka kahle futhi uzama ukuba banakekele, ukuvikela, ezwa izono zakho futhi abekezelele isheshe ithukuthele - angase esebenza kuwe zoyise noma anobuhlobo, njengoba umngane abaphezulu kanye umngane omuhle. Siyabonga ke - into umqondo kunalokho kaPlato, hhayi ngokobulili. Believe me, lesi simo sengqondo futhi kuyabiza. Futhi uma ushintsho oyifunayo ohlangothini ngawe akukho okwahlula - ukwaneliswa yilokho esinakho, gcina lokhu ubungani, akukulahlekeli.
Futhi lokho kusho kiss kweqa lapho izindebe umlingani ngokulambisa ngokuthinta amakhona izindebe zakho? Cishe, a ukuzinyeza, amahloni athi Man. Wena ukumjabulisa, ke edonsela kuwe, ulinde isikhuthazo sakho. Kwenze kucace ukuthi amtshele indlela amthanda yakhe wena yamjabulisa ukuthi uzizwa okuhle naye. Bonisa uphiko oluncane - futhi bayovuzwa umthandi abanothando!
Ngomusa kodwa ngokuqinile izindebe zakhe nezakho - lokho kusho ngokuyanga na? Iqiniso ukuthi uyathandwa, leyo nsizwa ufuna ngempela ukuba nawe, uzwa isifiso somuntu, lokho esasile Amacebo. Uma uzizwa ungakhululekile ngokulandela le, ukuqina - khumbula ukuthi yabo ethile amasu kiss indoda uzama khulula wena, ukuzola, uphumule, funda ukuzwa injabulo inqubo.
Biting, ulimi gona, isineke, izindebe ngisho abahahayo - ubufakazi kokhela izinkanuko, izifiso ukusondelana frank - yilokho lokhu uthi ngokwanga, oqala ukuzizwa isiyezi inhliziyo futhi ngithukuthele ishaya ngamandla. Ngo zikhathi kokubili kulula ukulahlekelwa ikhanda lakho. Ngakho-ke, uma ubuhlobo bomuntu siqu unokuthile udidekile - zama ukuba abe phezu uqaphile ..
Smack e ichopho ekhaleni - inkulumo ecacile nangobuqotho othando, uzwela futhi ozethembayo. Wena sisondelene naye ngokomoya nsizwa, ungeyena kuphela intandokazi yakhe, kodwa lowo kukhulisa inani imizwa yakho ngezinye izikhathi. Kukhona ngisho kungenzeka abakwethembi lokho abakufunda ithi ukuqabulana uhlobo. Ukuthinta izindebe zakhe izinwele zakho ezifakazela okufanayo. Believe me, muntu uyoba njengomfundisi kissing owesifazane ngeyendoda eyisihambi kuye!
Manje ake sibheke izandla. Uphathina ngokuvamile ubeka izandla zenu ukuze ezihlathini zakhe, ngomusa ngesisa afeze izindebe zabo? What do amadoda ukuqabulana kulokhu? Nalapha futhi, ivoti ukuzethemba, ubuqotho, inhlonipho, ukuzinikela. Iqiniso lokuthi akuthandayo, futhi uthanda sina. amadoda amaningi esaba ukukhombisa ubuthaka babo phambi owesifazane, ukuzilwela, awukwazi usuvulekile. Futhi ukuqabulana izandla, futhi ngaphandle emabhulashini (ngaphandle wamukelekile esemthethweni) - isibonakaliso kuwe sokuthi yimi nawe nguye ukhululekile ukuthi - umphefumulo bomshado, kwesigamu nomunye.
Izindebe zaso ojikelezayo esentanyeni yakho, nomphimbo, indlebe iyizingxenye? Lokhu kusho ukuthi umlingani wakho ufuna ukukunika imizwelo eyakhayo, nakho kujabulise, izikhathi ezicacile, injabulo zangasese. uthando ezinjalo uhlobo umdlalo, wedlula kalula foreplay isinyathelo nezisobala ngaphezulu.
Yiqiniso, uhlu lwethu alupheli. Kodwa kusekelwe ezihlukahlukene ulwazi theory kanye nama-practical, kodwa ngoba kungenziwa Wathembela. Ukuthandwa, bayazithanda - ke ngamunye wathola futhi wanikeza ngokwanga ukukulethela zikhathi okujabulisayo okwenzekile ekuphileni.
KDP - kuyini? Ukulondoloza i-CDP - kuyini?
Point ukukhanya ophahleni okwesikhashana
Sakhiwo umsebenzi uqhoqhoqho